दिनहरु कठिन बनिरहेका छन् ? आफैदेखि असुरक्षित ठानिरहनु भएको छ ? एकपटक यो पढ्नुहोस्
एजेन्सी । आजको युगमा मानिसहरु आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नको लागि अन्धो भएर लक्ष्यको पछाडी दौडन्छन् । केही मानिसहरुलाई मात्रै थाहा हुन्छ कि आफुले के पाउनुछ तर, अन्य धेरै भने के हाँसिल गर्नु भन्ने थाहा हुँदैन र पनि दौडिन चँैै सबै दौडिरहेका हुन्छन् ।
सबैजना दौडिरहेका छन् भने सबैको आ–आफ्नै लक्ष्य हुन्छ र यदि एकै खालको लक्ष्यको लागि धेरै खालको मानिस दौडधुप गरिरहेका छन् भने मानिसलाई असुरक्षाको भाव आउनु स्वभाविक नै हो ।
कहिलेकाहीँ त यस्तो भावना हाम्रो आफ्नो मानिसमा पनि आउन सक्छ । घरमा भएका महिलाहरुलाई लाग्न सक्छ मेरो पतिले मेरै लागि यो सब गरेपनि के म सुरक्षित छु त ?
बच्चा, युवा र बुढा सबैलाई एक अचम्मको असुरक्षाको भावनाले ग्रसित बनाएको हुन्छ । सबैले आफुलाई धेरै नै असुरक्षित मान्छन् । तर एउटा यस्तो शक्ति जो तपाईसँगै हुन्छ र यदि तपाई त्यस परमशक्ति सँग जोडिनुभयो भने तपाईमा असुरक्षाको भाव हट्नेछ ।
कोही मानिसलाई असुरक्षाको भावनाले यतिसम्म सताँउछ कि उ धेरै तल्लो स्तरमा गिरेर भएपनि आँफुलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी भन्दा माथि पुर्याउन खोज्छ । उसले पुर्वाग्रहले ग्रसित भएर यस्ता कामहरु गर्न पुग्छ जुन उसले गर्न हुँदैनथ्यो ।
एउटा यस्तो कथा छः ‘अष्टावक्रको शरिर आठ ठाँउमा बाङ्गो थियो । यस्तो उनको आफ्नै पिताको श्रापको कारणले भएको थियो । अष्टाबक्र बालक गर्भावस्थामै यती योग्य थिए कि पितासँग प्रश्नोत्तर गर्न सक्थे । उनको पितालाई लाग्यो जन्म पछि यसको आफुसँग प्रतिस्पर्धा जस्तो हुन्छ लाग्यो जुन उनी चाँहदैन थिए । एक पिता आफ्नो पुत्रको योग्यताबाट नै असुरक्षित भए र क्रोधमा डुबेर उनले आफ्नो छोरालाई श्राप दिए ।
यस्ता धेरै किस्साहरु सुन्न पाइन्छन् तर परमशक्तिको विधानले यो आश्वस्त गर्छ कि सबैलाई मानिसलाई आफ्नो भागको जसरी पनि मिल्छ । जब एकै लक्ष्यको दिशामा धेरै मानिसहरु दौडिरहेका छन् भने तपाई आफ्नो योग्यता र क्षमता बढाउनुहोस् ।
तपाई कुनै विशेष सफलताको लागि छानिनको लागि तपाईमा योग्यता र धैर्यता हुन जरुरी छ । त्यसका साथै तपाईमा सबैभन्दा बढि आत्मबल र आन्तरिक उर्जा चाहिन्छ । तपाई परमशक्ति सँग जोडिएर स्वयमलाई सुरक्षित राख्नुहोस र त्यसपछि आफ्नो अभियानमा निस्कनुहोस यसपछि तपाईलाई कसैले पनि असुरक्षित बनाउन सक्दैन ।
सफलता चाहिएको छ भने यी कुरामा ध्यान दिनुहोस छिट्टै सफलता मिल्छ
तपाई जुन सुकै काम गर्नुहोस तर पुरै मन लगाएर गर्नुहोस् । यसो गरेमा मात्रै भने तपाई भित्रको सन्यासी वा फकिरी आफै हट्छ । सन्यासको एक अर्थ हुन्छ हरेक अवस्थामा पनि शान्ति छाउनु । शान्तीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने एक शब्द ध्यानमा राख्नुहोस ‘स्वाद’ । जीवनमा जुनसुकै क्षेत्रमा ‘स्वाद’ बनाइराख्न छ भने त्यसको लागि तपाईले सम्बन्धहरुलाई राम्रोसँग निभाउनु पर्छ ।
हामी धेरै पटक परिवारसँग बस्दा कुनै भौतिक वस्तुहरुको बारेमा मात्रै सोचिरहेको हुन्छौँ । एक घर, एक गाडी, केही मानिसहरु र उनीहरुको सुविधाहरु यसको नाम मात्रै परिवार होइन । यदि परिवारिक सम्बन्ध छैन भने सम्झिनु होस् तपाई कुनै होटल या धर्मशालामा बसिरहनु भएको छ । जहाँ धेरै खालका मानिसहरु आँउछन जान्छन् र घरका मानिसहरु पनि तपाईलाई त्यस्तै लाग्न सक्छ ।
सम्बन्धलाई देख्नको लागि तपाईमा एक विशेष किसिमको ज्योती चाहिन्छ । यसैले साधुसन्तले परिवारहरुलाई एक सल्लाह दिएका हुन्छन साँझको बेलामा घरमा दियो बत्ति जरुर बाल्नुहोस् । त्यसको प्रकाश र सुगन्धले तपाइलाई केही नौलो चिज देखाँउछ र केहि आत्मियता महसुस गराँउछ ।
साँझमा घर आएर थाकेको शरिर हेर्नको लागि मात्रै प्रकाशको आवश्यकता छैन् । सम्बन्धको महसुस गर्नको वायसलाई नाप्नको लागि पनि प्रकाश चाहिन्छ । साँझको बेलामा जुन दियो बाल्नुहुन्छ त्यसको प्रकाशमा आफ्नोपन हेर्नुहोस, आफ्ना मानिसहरुलाई हेर्नुहोस ।
तुलसीको मठ नजिक बालिने दियोमा आफ्नो प्रियजनको छवि, उनीसँग साथ बिताएको क्षणहरु याद गर्नुहोस तपाईले प्रेम र न्यानो साथ महसुस गर्नुहुनेछ ।
सधैँ केवल दियो बालेर मात्रै नछोड्नुहोस त्यसमा एक प्रयोग गर्दै रहनुहोस् । साँझपख जब दियो बाल्नुहुन्छ त्यसको ज्वालामा एक चलचित्र जस्तो आफ्नो परिवारको दृश्यलाई सम्झनुहोस । तपाई त्यसमा अचानक प्रेमको महसुस गर्न सक्नुहुनेछ र अचानक तपाईको उदासी हराउनेछ । त्यो प्रकाशले तपाईलाई त्यहाँ लैजान्छ जहाँ साँच्चै तपाई आफ्ना प्रिय मानिसहरु सँग भएकोमा सुखी महसुस गर्नुहुनेछ ।